အီတလီ၏မြို့ကြီးများ, Renaissance ၏ပုခက်မှတဆင့်ခရီး | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | Getaways ဥရောပ, လမ်းပြ, ခရီးသွား
ရောမမြို့ရှိ Navona ရင်ပြင်
အီတလီမြို့ကြီးများသည်ခရီးသွား could ည့်သည်များဆန္ဒအလိုက်စုစည်းကြသည်။ ဂရိနှင့်အတူအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုပုခက်နှင့်ရောမဘာသာစကားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်လက်တင်အလွှာကိုဖန်တီးသူလည်းအီတလီသည် Renacimiento နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အကြီးမြတ်ဆုံးပါရမီအချို့၏ဇာတိမြေ။
တကယ်တော့၊ သူ့ရဲ့မြို့တွေမှာအထိမ်းအမှတ်တွေအများကြီးရှိပြီးအံ့ဖွယ်ရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အကယ်လို့မင်းတို့အားလုံးကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်၊ Stendhal ရောဂါ, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအနုပညာအကျင့်ကိုကျင့်သက်သေခံပြီးနောက်ခရီးသွားဝင်သောအတွက်ထူးခြားသောပြည်နယ်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့နာမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့တော် မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအီတလီရှိအလှဆုံးမြို့များသို့လာရောက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
0.1 ရောမမြို့, အီတလီမြို့ကြီးများအကြားထာဝရ
0.2 ဗာတီကန်စီးတီး, ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အံ့သြစရာ
0.3 မီလန်, အထိမ်းအမှတနှင့်ပြည့်ဝ၏စီးပွားရေးမြို့တော်
0.4 ဗင်းနစ်, တူးမြောင်း၏မြို့
0.5 Florence, Tuscany ၏မြို့တော်
သင်မြင်နိုင်သမျှကိုရှင်းပြပါ ရိုးမား လိုင်းအနည်းငယ်တွင်၎င်းသည် Don Quixote တစ်ခုလုံးကိုကျောင်းမှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တူ၏။ သူ၏လက်တင်အတိတ်မှသင်၌ရှိသည် Coliseum၎င်းကိုVကရာဇ် Vespasian ကဆောက်လုပ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးလူ ၅၀,၀၀၀ အတွက်နေရာရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ် ရောမဖိုရမ်၎င်းသည်အင်ပါယာ၏မြို့တော်၏အာရုံကြောဗဟိုချက်ဖြစ်သည့်တိတုနှင့်သတ္တမမြောက်မြောက်မြောက်ဖြစ်သောတိတုများနှင့်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များဆုံတွေ့ခဲ့သောအူတိုနင်နပ်စ်နှင့်ဖော့စတီနာနတ်ဘုရားကျောင်း၊
မြို့၏အံ့ဖွယ်မြို့ပြနေရာများမှာ Navona စတုရန်း ၎င်း၏အများအပြားသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူ။ ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်သဘာဝရှိတယ် Trevi စမ်းရေတွင်း, ရောမ၏သင်္ကေတတစ်ခု။ ၎င်း၏ပုံစံသည် ၁၈ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ သင်တစ်ခုခုကိုမမေ့နိုင်ပါ နင်လမ်းတလျှောက်ရှိစျေးများနှင့်ပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ရောမ၏နန်းတော်များမှာမူ၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လည်ပတ်မှုများဖြစ်သည် ဗီလာ Borgheseကမ္ဘာပေါ်ရှိပန်းချီပြတိုက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ က Palazzo Maximoအကောင်းဆုံးနေရာတွင်တည်ရှိသောရောမနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများကိုတွေ့နိုင်သည်။ က Altemps နန်းတော်ဂရိနှင့်ရောမပန်းပုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်; က ဗင်းနစ်နန်းတော်အနုပညာနှင့်ပြည့်ဝ၏ ဘာဘာနီနီနန်းတော်, Baroque စတိုင်တစ်ခုအထင်ကြီးဆောက်လုပ်ရေး။
နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းတော်များအကြောင်းစပြောကြမည် စိန့်ဂျွန် Lateran ၏ Basilica၄ ရာစုတွင်မဟာကွန်စတင်တိုင်းအမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးရောမတွင်ပထမဆုံးသောကက်သလစ်ဘာသာဖြစ်သည်။ နှင့် San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor သို့မဟုတ် San Clemente ၏ဆက်လက်။ သို့သော်ရောမမြို့တွင်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ခုရှိပြီးသင့်အားထာဝရစီးတီးရှိသကဲ့သို့အံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်စေနိုင်သည် - ဗာတီကန်။
၎င်း၏အံ့မခန်းအတိုင်းအတာနှင့်တကွ, စိန့်ပီတာစတုရန်း ကသေးငယ်တဲ့ကက်သလစ်ပြည်နယ်၏အာရုံကြောစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Bernini မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်၎င်း၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းသည်သူတော်စင်တို့၏ရုပ်ပွားတော်များအနားယူရန်အထင်ကြီးလောက်သောကော်လံများဖြင့်ထင်ရှားသည်။
၎င်း၏နှစ်ဖက်တစ် ဦး တွင်ဖြစ်ပါတယ် စိန့်ပေတရု၏ BasilicaBramante, Miguel Ángelနှင့် Maderno တို့ကဲ့သို့သောပါရမီရှင်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံး ၁၃၆ မီတာသို့ရောက်ရှိပြီးအမိုးခုံးတည်ရှိသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပို။ ပင်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Sistine Chapelသော၌တည်ရှိ၏ တမန်တော်နန်းတော် နှင့်သူ၏ပန်းချီကားများဖြစ်သောထိုကဲ့သို့သော Michelangelo ကိုယ်တော်တိုင်, Botticelli, Ghirlandaio သို့မဟုတ် Perugino အဖြစ်ပါရမီကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗာတီကန်သို့အလည်အပတ်ခရီးသွားရန်အဖိုးတန်သည့်ပြတိုက်အချို့ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ယင်းတို့အနက် Pinacoteca၊ အီဂျစ်ပြတိုက်၊ Ethnological သာသနာပြု၊ Candelabra ၏ပြခန်းသို့မဟုတ် Etruscan ပြတိုက်။ ဗာတီကန်သည်အီတလီမြို့များအကြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့မီလန်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်သင့်အားမြောက်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Celts ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးခေါ် Mediolanum လက်တင်စကားအားဖြင့်, ကမီးမောင်းထိုးပြ Duomo သို့မဟုတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ နပိုလီယံဘိုနာပါတ်၏အမိန့်အားဖြင့် ၁၉ ရာစုတွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, Sforzesco ရဲတိုက် ကမ္ဘာ၏ထင်ရှားသောအပြင်ဘက်မျက်နှာစာနှင့် Clock Tower အတွက်ထူးခြားသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းကြီးမားတဲ့ပြတိုက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲတွင်ထူးခြားသောရုပ်ပုံပြခန်းနှင့်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ 'Trivulziano Codex' ကဲ့သို့သောရတနာများရှိသောရှေးဟောင်းအနုပညာပြတိုက်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြို့ရှိအထင်ကရအထင်ကရအဆောက်အအုံများနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည် Vittorio Emanuele II ပြခန်း၎င်း၏ကြီးမားသောဖန်ခွက်သိုလှောင်ရုံများနှင့်၎င်း၏ဂန္ကဖေးများ။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်အချိန်ရှိလျှင်မီလန်သည်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ la Scala ပြဇာတ်ရုံ, အ စိန့် Ambrose ၏ Basilica သို့မဟုတ် Sempione ပန်းခြံ.
Vittorio Emanuele II ပြခန်း
ယခင်မြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်လှပသောအီတလီမြို့တစ်မြို့ရှိသည်။ ဗင်းနစ်, Veneto ၏မြို့တော်။ သူမ၏ကျော်ကြားမှုသည်အလွန်ထင်ရှားသည် စိန့်မာ့ခ်၏ရင်ပြင်ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် Basilica တူညီသောအမည်, ဒေသနှင့်၎င်း၏နှင့်အတူဘိုင်ဇင်တိုင်းဗိသုကာ၏လက်ရာ ဆွေမျိုး ကင်းလွတ်ခွင့်
ရင်ပြင်ကိုမထွက်ဘဲ၊ Ducal နန်းတော်ဤသည် Renaissance ရင်ပြင်သည်လှပသော Venetian Venetian Gothic ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူမြို့၏အခြားခမ်းနားသောနန်းတော်များလည်းရှိသည် Ca d'Orအဆိုပါ Palazzo Dolfin Manin သို့မဟုတ် Contarini del Bovoloအပြင်ဘက်တွင်လှပသောလှေကားထစ်များကြောင့်လူကြိုက်များသည်။
ဗင်းနစ်ကိုကျော်ပြီးကျော်ကြားလို့မရဘူး Gondolas။ ၎င်းတို့ကိုတူးမြောင်းများပေါ်သို့မောင်းနှင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Florence, Tuscany ၏မြို့တော်
လှပသော Tuscany ၏မြို့တော်, Florence အမှန်တကယ်အထင်ကြီးစရာပါပဲ။ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်စင်တာဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှစ၍ အလယ်ခေတ်နှင့် Renaissance အဆောက်အ ဦး များပြည့်နှက်နေသည်။ The Santa Maria del Fiore ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းBrunelleschi ၏လက်ရာသည်၎င်း၏စကျင်ကျောက်မျက်နှာစာနှင့်ကြီးမားသောအမိုးခုံးနှင့်အတူ။
သင်တို့သည်လည်းကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် နန်းတော်ဟောင်းလူကြိုက်များအတွက် Signoria စတုရန်း။ ၎င်းကို ၁၄ ရာစုအစတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအလယ်ခေတ်ခံတပ်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရသည်။ ဒီရန်အလွန်နီးကပ်ကျော်ကြားဖြစ်ပါတယ် Ponte vecchioဖလောရင့်စ်တွင်ရှိသည့်များစွာသောအမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၄ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်လူနေအိမ်များရှိသောကြောင့်ထူးခြားသည်။
နောက်ဆုံးတွင် Tuscan မြို့ကိုမသွားဘဲမသွားနိုင်ပါ Uffizi ပြခန်း, Giorgio Vasari ကဒီဇိုင်းနန်းတော်၌တည်ရှိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးအနုပညာစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းတို့ပြတိုက်တွေအကြောင်းမင်းတို့ပြောရင်ဒါကိုကြည့်ဖို့အရမ်းအကြံပေးတယ် Florence အကယ်ဒမီ၏ပြခန်းဘယ်မှာလဲ ဒါဝိဒ်သည် Miguel Ángelဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Santa Maria del Fiore (Florence) ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Transalpine နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးသောအစားအစာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အီတလီရှိမြို့ကြီးအားလုံးတွင်ခေါက်ဆွဲနှင့်ပီဇာအပြင်အခြားအစားအစာများရှိသည်။ ရောမမြို့မှာနာမည်ကြီးဟင်းလျာများရှိတယ် အဲဒီမှာ coda vacinaraဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူနွားနို့ကိုစွပ်ပြုတ်, ဒါမှမဟုတ် carciofi alla giudia, အချို့ကြော် artichokes ။
အရသာရှိတာက Milanese အစားအစာပဲ။ ဒီ၌ ချက်ပြုတ်ထားသောပြောင်းဖူးအစားအစာမှိုများသို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းများနှင့်ပြည့်နေသောပြောင်းဖူးသန့်စင်; က ossobucoများသောအားဖြင့်ပါ ၀ င်သောအမဲသား၊ risotto, ဒါမှမဟုတ် cotoletta alla milanesa, breaded နွားငယ်သား cutlet ။ သင်တို့သည်လည်းကျော်ကြားတူသောအချိုပွဲကြိုးစားသင့်ပါတယ် သီရိ ဒါမှမဟုတ် creme brulee ။
၎င်းအနေဖြင့်ဗင်းနစ်တွင်သင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ထိခိုက်ပင်လယ်စာကြက်ဥနှင့်ကြော်ထားသောငါးများ၊ ငါးများ၊ Venetian ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသည်းကြက်သွန်နီနှင့်ထောပတ်တို့ဖြင့်ကြော်ပြီးပိုလီတာ၊ ဘေကွန်နှင့်အတူဆန်.
နောက်ဆုံး Florence မှာ လွမ်းတယ်အရသာရှိတဲ့အမဲသားစွပ်ပြုတ်၊ က လွိုင်ကော်မြို့ပင်သားညှပ်ပေါင်မုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည် tripe; က Papa အယ်လ် pomodoroခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံလွင်ဆီ၊ ပင်စိမ်းနှင့်ပေါင်မုန့်ပါသည့်ဟင်းချိုတစ်မျိုး bistecca alla fiorentinaတစ်ကင်အမဲသား ribeye ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့၊ အီတလီမှာရှိတဲ့ဒီမြို့အားလုံးဟာမင်းကိုအံ့သြစေမှာပါ။ သူတို့ကသင့်အားလာရောက်လည်ပတ်ရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်ရှိလျှင်အခြားသူများစွာသွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရန် Veronaယင်းတို့အားလုံးသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရန် Pisa၎င်း၏ကျော်ကြားမြှောင်မျှော်စင်နှင့်အတူ; ရန် တူရင်, အီတလီစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၏ပုခက်, ဒါမှမဟုတ် NaplesPompeii နှင့် Herculaneum တို့၏အပျက်အယွင်းများရှိသည်။ Padua၊ Modena၊ Mantua, Bergamo (သို့) Bolzano, Ferrara (သို့) Ravenna စတဲ့လူသိနည်းတဲ့သူတွေကိုမမေ့စေချင်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အီတလီမြို့ကြီးများ
အဘယ်အရာကို Archena, Murcia တွင်ကြည့်ရှုပါ